Dowladda Soomaaliya oo xirtay wariye maalmo ka dhuumanayey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Soomaaliya oo xirtay wariye maalmo ka dhuumanayey
Mareeg.com: Ciidamada Nabad Sugidda ee dawlada Soomaaliya ayaa shalay gacanta ku dhigay weriye ay maalmo badan raadinayeen, kaasoo uga dhuumaaleysanayey xaafadaha Muqdisho.
Wariyahan shalay galab la qabtay ayaa aha madaxii wararka Radio Shabelle, Maxamed Bashiir Xaashi. Radio Shabeelle ayaa dowladda Soomaaliya xirtay 15 kii August 2014, kadib markii lagu eedeeyey iney si aan dowladdu jeleysan u tabiyeen weerar hubka looga dhigayey gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Daaci.
Ciidamadan ayaa la sheegay In Maxamed Bashiir Xaashi ay ku xireen Xabsiga Nabad Sugidda ee Godka Jilacow oo muddo 3 todobaad ah ay hore ugu xirnaayeen 3 ka mid ah suxufiyiinta Shabelle inkastoo Maalintii Khamiista 04 Sept. 2014 loo wareejiyey Xabsiga Dhexe.
Wixii ka dambeeyey 15-kii August 2014 waxaa hawada ka maqan Radio Shabeelle iyo Sky FM oo lahaa C/maalik Yuusuf, kaasoo isaga iyo Agaasimaha Sky FM Maxamuud Maxamed Daahir (Carab) iyo Ku xigeenkii Madaxa Wararka Shabelle Axmed Cabdi Xasan ay xabsiga ku jiraan.
15-kii August 2014 markii la xiryayey Radio Shabeelle iyo Sky FM waxaa xarrunta labadaas idaacadood laga qabtay 19 shaqaale, hase ahaate 17-kii isla bishaas ayaa la sii daayey 16 ka mid ah xubnahaas.
Hub farabadan oo laga soo qabtay mid ka mid ah degmooyinka Muqdisho